SIDA LOO SAMEEYO SABIIBTA CANAB GURIGIISA: TALLAABO TALLAABO TALLAABO AH - CANAB
Raisin waa shey aad u caansan, sababtoo ah waxay leedahay sifooyin wanaagsan. Dadka degaanka xagaaga ee leh beerta beertooda ee ku yaala goobahooda waxay isku dayi karaan in ay diyaariyaan sabiibka guryaha loogu talagalay isticmaalka mustaqbalka, maadaama aysan aheyn mid adag in la fuliyo nidaamkan. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira habab badan oo kala duwan oo la goyn karo miraha la qalajiyey. Waxyaabaha dhadhan fiican leh ayaa loo isticmaali karaa samaynta wax soo saarka, dubista, iwm. Sida loo qalajiyo canabkiisa guriga, waxaynu baraneynaa mar dambe maqaalkan.
Iskuuggu waa ku haboon yahay qalajinta
Inta badan loo isticmaalo qalajiyo noocyo canab ah oo aan lahayn miraha gudahood ee berry. Berrygu wuxuu noqon karaa mid yar iyo weynba, madow ama iftiin. Sababtoo ah xaqiiqda ah in alaabta qalalan ay hayso dabeecadaha dhadhanka ee nooc gaar ah oo canab ah, sabiibku wuxuu noqon karaa geedo-yar, dhir ama dhadhan-macaan. Inta badan badanaa for sabiibka goosashada isticmaalaan noocyada canab soo socda:
Kishmish madow, casaan, caddaan.
Ma taqaanaa? Geedkii ugu horreeyay ee sabiibka ujeedada ah ee iibinta waxaa la bilaabay in lagu fuliyo qiyaastii 200-300 g. e. Taariikhyahanadu ma dhihi karaan hubi in Ermeniya ama Fiktooriya ay sameeyeen. Laakiin waxaa la og yahay in Giriigga ka dib markii ay bilaabeen inay koraan ujeedada this canab gaar ah oo leh berry yar yar oo aan lahayn miraha, laakiin waqti isku mid ah waxay leeyihiin caraf xoog leh oo qurux badan. Kala duwan waxaa loo magacaabay "Korinka" oo sharaf leh meesha uu ku koray - Korintos.
Si aad u hesho tayo sare oo tayo fiican leh oo guriga laga sameeyo, kaas oo awoodi doona inuu ilaaliyo guryaha faa'iidada leh muddo dheer, waxaad u baahan tahay inaad si habboon u diyaariso canabka cusub ee goosashada. First of all, waxaa lagama maarmaan ah in dib loo eego iyo ka saaro dhammaan waxyaabaha aan haboonayn, ka saaro berry ah ee waxyeello, dents, dildilaaca, iwm. Waxaa sidoo kale la jecel yahay in la kala saaro berry yaryar iyo weyn. Dambe waa la jari karaa badhkeed si qallajis ah.
Baro sida loo qalajiyo tufaaxa, malab, naadi, cagaar, jimicsi, miro, boqoshaada lohodka guriga.
Tallaabada Adreeska Qalabka Qalabka Qalabka
Waqtigan xaadirka ah waxaa jira dhowr ka mid ah hababka ugu caansan ee sabirta loo sameeyo gurigaaga. Aad bay muhiim u tahay inaad doorato canabkiinna bislaaday oo keliya, maaddaama uu ka imanayo berry dhirta oo aad hesho alaab tayo leh. Waxaa lagu talinayaa in la raaco sharciyadan:
xayawaanka lagu sameynaayo sabiibta waa in si gaar ah loogu sameeyaa jawi qallalan oo qorrax leh. Miraha xad-dhaafka ah ayaa keenaya in badeecada ay qalajiso muddo dheer, taas oo yarayn doonta tayada;
Waxaa lagu talinayaa in aadan ku waraabin geedka canabka ah 8-10 maalmood ka hor intaan la goostin. Sidan, waxaa suurtagal ah in la yareeyo nuxurka guud ee qoyaanka midhaha;
ha dhaqin dalagga. Waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato berry oo aad gacmahaaga ka gesho oo aad iska ruxdo shabakadaha qashinka iyo caarada, haddii ay jirto. Kaliya marka laga reebo waa qoyaanka qoyan ee soodhada, taas oo la fulinayo si loo dedejiyo qalajinta canabka.
Ma taqaanaa? In kasta oo uu caan ka yahay dalalka saboolka ah, ee qaybta dhexe ee Yurub, haddana wax yar lama yaqaan. Waxyaabahan faa'iido leh waxay bilaabeen in la keeno Yurub kaliya qarnigii 11aad. Knights ayaa sameeyay tan, kaas oo iibsaday inta lagu guda jiray ololaha.
Habka ugu fudud ee ugu jaban ee sabiibta waa in la qalajiyo canabkiisa qorraxda. Run, habkani wuxuu ku habboon yahay gobollada leh xaaladaha cimilada qorraxda. Sidoo kale, haddii qaboojinta ama roobka la saadaaliyo muddada daaqa ah ee goosashada sabiibta, qalajinta dabiiciga ah ma shaqeyn doonto.
Waxaa lagama maarmaan ah in la xalliyo canab si bilaash ah, isla mar ahaantaana ay ka saarto qashinka, ka dibna lakabka isku midka ah ee berry ku rid saxarada leh mesh hoose. Qeybtan oo kale waxay ku siin doontaa hawo wanaagsan. Haddii aysan jirin wax saxan oo kale, markaa waxaad isticmaali kartaa saxanka qubeyska caadiga ah.
Kabuubyada leh cawska canabka ah waa in ay soo gaadhaan qorraxda.
Ka dib marka canabku wax yar ka yaryahay, waa inaad si tartiib ah u gudbisaa dhinaca kale.
Sheyga oo dhan wuxuu u baahan yahay in la qalajiyo 2-4 toddobaad. Waqtiga saxda ah wuxuu ku xiran yahay xaaladaha cimilada iyo qoyaanka canabka.
Xaydhku wuxuu diyaariyaa tiknoolojiyada noocan oo kale ah waxay noqoneysaa mid qalalan oo adag, laakiin markaa waxaa la keydin karaa waqti dheer iyada oo aan lagu daboolin caaryada.
Canab qallalan ayaa sidoo kale ku jiri kara hooska. Marka la eego sifooyinka tayada ee noocan ah sheyga ayaa ka duwanaan doona kaas oo diyaargaroobay habkii hore. Dhalada ayaa soo baxaya qoyaan iyo jilac. Qalajinta, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso qol qallalan oo hawo fiican leh, tusaale ahaan, santuuqa. Nidaamka qalajinta waa muddo dheer waxayna qaadan kartaa ilaa 2-3 bilood.
Qol qallalan, waa in aad foorarsato xargaha khafiifka ah. Tusaale ahaan, waxaad isticmaali kartaa xargaha dharka dharka. Canab waxaa lagu qalajin doonaa rucubood.
Rucubyada waa in lagu xiraa xarigga, iyaga oo ku xiraya dharka maqaarka. Burushka waxaa sidoo kale lagu xiri karaa nambar xoog leh oo laba qaybood ah, ka dibna si fudud ugu tuur xarkaha.
Waxa kale oo aad qallajin kartaa canabkiisa foornada, laakiin hirgelinta habkani ma aha mid ku haboon, sababtoo ah waxay qaadataa ilaa 30 saacadood. Habkani wuxuu u baahan yahay isticmaalka gaaska ama korontada. Laakiin, haddii tani ay tahay xalka kaliya ee la awoodi karo ee canabka beergooyska, markaa way fududahay in la fuliyo. Waxay qaadan doontaa: 1 kg oo ah canab, soodhaha (1 qaado oo la cabo), 1 l oo biyo ah.
Waxaa lagu talinayaa in marka hore lagu qoyn karo canab dhan ee soodhaha 10 daqiiqo, ka dibna maydh oo qalalan. Marxaladani waa laga boodi karaa, laakiin xalalka soodhaha ayaa kaa caawin kara yareynta waqtiga qalajinta miraha.
Cunto la qalajiyey waa in la dhigaa ganaaxyo kuwaas oo horay loogu taliyey in ay daboolaan xoqan.
Marka xigta, badeecadda ayaa lagu rakibay foornada. Waa la ogol yahay waqti isku mid ah in la dhigo wax yar oo ka sii xun.
Foornada waa in lagu kululeeyo 90 darajo. Marxaladda koowaad ee qalajinta waxay socotaa ilaa 5 saacadood. Waxaa lagugula talinayaa inaad si yar u furto albaabka foornada, si ay qoyaanka uga soo baxaan.
Kadibna waxaad u baahan tahay inaad hesho baayacmushtarka oo si tartiib ah isku daraan canab. Sidaas awgeed qoyaanku si siman ayay u uumi baxayaan.
Tuubooyinka ayaa lagu soo celiyaa foornada. Heerkulka waa in la yareeyo ilaa 70 darajo oo qallaji karo berry ilaa laga gaaro hindisada.
Alaabada la dhamaystiray waa in laga saaraa foornada oo ay ku ridaan hawo nadiif ah oo leh weelasha dubista. Maadaama ay cowsku hoos u dhaceen mugga, waxaa lagu ururin karaa hal warqad. Dareemku waa inuu si wanaagsan u hawoqonayaa, sababtoo ah wuxuu u baahan doonaa dhowr saacadood. Ugu danbeyntii waa in laga saaraa kaydinta.
In qalabka korantada
Si aad ah u fududaynaya habka loo beero aruurinta guriga markaad isticmaasho qalajiyaha korantada. Nidaamka lagu qalajiyo canabkiisa korriinka korontada uma baahna fiiro gaar ah. Waxaad ubaahan tahay inaad u baahato tiro yar oo canab ah oo kudub ah, oo aad u jeeddo qalabka si aad u sugto natiijada.
Waa in la ogaadaa in ay suurtogal tahay in la saaro canab aan la dhaqin oo qalajiyaha korontada ku shaqeeya, iyo sidoo kale kuwa horey u qooyay xal soodhaha. Miraha lagu qooyay, sida aad ogtahay, waxaa loo diyaarin doonaa si dhakhso badan.
Si aad u qallajisid si siman, waxaa lagugula talinayaa in aad wax ka qabatid tukatiyada marba mar. Sidoo kale, marka marinnada hore u qalajiyey, waxaad iyaga ka tegi kartaa "u bislaadaan" qolka si fiican u neefta, isla markaana markaa buuxi qallalan koronto leh qayb cusub oo canab ah.
Waa muhiim! Xaddiga dhabta ah ee waqtiga uu qaadanayo si loo qalajiyo sabiibta waxay ku xiran tahay awoodda qalabka korontada, iyo sidoo kale noocyada canabkiisa. Laakiin inta badan waqtiga qalajinta ee qalajiyaha korontada ma qaato wax ka badan 48 saacadood.
Sida loo go'aamiyo diyaargarowga
Qalabka la qalajiyey ayaa loo baari karaa diyaar garowga iyadoo joogitaanka qoyaanka. Si arrintan loo sameeyo, kaliya hoos u cadaadi moyaha leh farahaaga. Dhirta si fiican u qalajiyey ma siinayaan casiir. Waxay awoodi doontaa in lagu kaydiyo muddo dheer, isla markaana isla markaasi ma lumiso sifooyinka nafaqada ama dhadhanka.
Baro cuntada sida loo kariyo geedaha, gooseberries, sunberry, yoshty, viburnum, abrikot, jeeriga, blueberries, tufaaxa, hawo guga loogu talagalay jiilaalka.
Kaydinta ku haboon guriga
Isticmaalkoodu waa mid aan qabyo ahayn. Haddii aad ogtahay sida si haboon loogu kaydiyo guriga, waxay noqon doontaa mid la cuni karo dhowr bilood ama xitaa sanado.
Habka ugu fudud ee lagu keydiyo sabiibta boorso dusha ah. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad ku shubto alaabta ku jirta oo ku rid boorsada shelf ee qol qallalan. Daawadani waa neefsasho, kaas oo gacan ka geysan doona sabiibta muddo dheer lagu kaydiyo. Haddii ay dhacdo in cayayaanka laga helo gudaha gudaha, bacda marada waa in marka hore lagu qooyo xal saliideed ah. Marka xigta, waxay u baahan tahay in la qalajiyo, oo aan biyo ku nadiifin biyo nadiif ah, oo ay ku jiraan sabiibta.
Weelasha dabka waxay kaloo ku haboon tahay in la kaydiyo sabiibta. Waa muhiim in aanay si haboon u xirneyn. Halkii laga dabooli lahaa, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo faashad ama qaado daboolka kabadhada iyo laba godood. Aad bay muhiim u tahay in oksijiinku si xor ah u dhex mari karo hanta.
Waxaad ku kaydin kartaa sabiibta qaboojiyaha. Miraha la qalajiyey waxaa la geliyaa weel caag ah waxaana loo diraa shelf. Haddii aad qorsheyneyso inaad ku keydiso qolka madow, ka dibna xirmada waxaad u baahan tahay inaad marka hore sameyso meelo dhawr ah.
Waa muhiim! Kala soco sabiibta ka hor inta aan la kaydin si dhammaystiran. Miraha la qalajiyey ee la dhaqay ayaa lagu daboolay lakab dabiici ah oo ka ilaaliya xagta. Haddii aad iska maydhid, nolosha shelf ee alaabta dhameystiran ayaa si weyn hoos loogu dhigi doonaa.
Ikhtiyaarrada samaynta sabiibta ayaa sameeya shuruudaha cunto karinta guriga waxaa jira dad badan. Keliya dooro midka ugu sahlan ee lagu hirgeliyo jawiga hadda jira. Wakhti iyo dadaal waqti gaaban ayaa si buuxda u magdhabay wax soo saar leh oo caafimaad leh.